काठमाडौं ३० मंसिर । ‘नेपालले हामीलाई बेवास्ता गरेको कि हामीकहाँ पठाउने कूटनीतिज्ञ नभेटेको हो ? ’ दक्षिण कोरियाली दूतावासका प्रतिनिधिले भेटैपिच्छे ठट्टा शैलीमा राख्ने जिज्ञासा
बिहेकै भोलिपल्ट श्रीमतीको हत्या
काठमाडौं २९ मंसिर । गत मंसिर ९ गते २० वर्षीय अनिशा तामाङलाई दुलहीका रुपमा भित्र्याएका धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–३ का २३ वर्षीय अर्जुन थापा मगरले भोलिपल्टै हत्या गरेका छन् । मकवानपुरकी २०
काठमाडौं २९ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो समय स्थानीय सरकारविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेका
कांग्रेसका ७ नेकपाका ८ जना सांसदको पद जादै
काठमाडौं २७ मंसिर । राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ। राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९
भव्य भवन, खाली कक्षा
काठमाडौं २७ मंसिर । विज्ञान प्रयोगशाला र अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पर्याप्त स्थान, उज्याला र चम्किला कक्षाकोठा साथमा आधुनिक बास्केट बल कोर्ट, पुस्तकालय र चमेना गृह। राणा शासनको सुरुमै १६६ वर्षअघि
पत्रकार सम्मेलनमा ढिलो पुगेको भन्दै एक पत्रकार कुटिए
काठमाडौं २७ मंसिर । पत्रकार सम्मेलनमा ढिलो पुगेको भन्दै एक समूहले नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका उपाध्यक्ष सन्तोष काफ्लेलाई बिहीबार दिउँसो सार्वजनिक स्थलमै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको छ ।धरान– १२
काठमाडौं २७ मंसिर । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका केही स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको
प्रचण्ड एकान्त वासमा, के आउँदैछ नयाँ ?
काठमाडौं २७ मंसिर । शनिबार बस्ने सचिवालय र आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने गरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक
काठमाडौं २७ मंसिर । साउदी अरबले बिदामा आएका कामदार भिसाको म्यादभित्रै नफर्के तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । साउदीको राहदानी विभाग (जवाजत) ले भिसा रद्द नगरी साउदी छाडेपछि
काठमाडौं २६ मंसिर । अन्सर मोहम्मद र हुसेन हसिद म्यानमारबाट विस्थापित भएर बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन विताइरहेका थिए । नेपालमा शंयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोग(यूएनएचसीआर)बाट शरणार्थीको मान्यता पाइन्छ भन्ने उनीहरुले सुने ।